Chii chinonzi Healthcare Kushambadzira? | Martech Zone
Chii chinonzi Healthcare Kushambadzira?
Chipiri, Zvita 4, 2018 Chishanu, December 7, 2018 Ashley Walsh
Paunenge wapinda mutsaona yemotokari, ukawira pasi kana kutambura neimwe mhando yekukuvara kwakakomba, chinhu chekupedzisira chaungangofunga nezvacho ndechekuti ndeipi imba yekukurumidzira yaunoda kushanyira zvichibva pane yekupedzisira yekutengesa, bhodhi rebhodhi kana tsamba yeemail yawakaona. . Iyo fanera yekutengesa haishande panguva yekukurumidzira.
Zvisinei, kushambadzira kwehutano kwakanyanya kudarika kushambadzira madhipatimendi echimbichimbi uye zvikamu zvekuchengetedza zvakanyanya. Zvipatara, makiriniki ekurumidziro ekuchengetedza, uye nzvimbo dzehutano ndezve basa rekusimudzira akasiyana siyana masevhisi anodzosera kumashure kune yekutengesa fanera.
Nepo kushambadzira kwehutano kwakafanana nemamwe marudzi echinyakare ekushambadzira, ngatitarisei mamwe akasarudzika ekushambadzira muiyi indasitiri:
Nharaunda Zviitiko uye Zvirongwa
Nyowani data kubva Moody's Investors Sevhisi inoratidza kuderera kukuru muchipatara kunoshanda kuyerera kwemari. Zvinotaurwa naMoody zvakadonha kubva pa9.5 muzana mugore ra2016 kusvika pa8.1 muzana muna2017- kuderera kusati kwamboitika kwakapedzisira kuonekwa panguva yedambudziko remari ra2008. Nhamba dzakadai hadziratidzi zvakanaka kugadzikana kwemari kwenguva yakareba, ndosaka vatungamiriri vazhinji vezvipatara vari kutsvaga zvimwe zvekuwana mari.
Zvimwe zvipatara zvave kuunza mari kubva kuzvirongwa zvehutano uye zviitiko zvakakosha mukuyedza ku kukanganisa kurasikirwa mune mamwe madhipatimendi. Zvirongwa zvehutano hazvibatsire chete kudzivirira kukuvara uye kurwara, asi sekureva kweMedical Fitness Association, ivo vari kuwanawo miganho yemipiro yakakwira se 30 muzana. Zviitiko zvakakosha zvinogona kuve zviwanikwa zvakakosha zvemari zvakare. Muna 2017 chete, Vana Chishamiso Network Zvipatara yakasimudza inodarika madhora zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kuburikidza nemambure egore reDance Marathon.
Sezvineiwo nechero bhizinesi, mukurumbira wakakosha mukukwezva kwete varwere chete asiwo tarenda repamusoro. Nzvimbo dzekudzokorora vatengi, senge Yelp, yakawana mukurumbira pakati pe2000 uye ikozvino inokwezva mamirioni evashandisi mazuva ese. Healthgrades, inotungamira webhusaiti yekuongorora nezvehutano webhusaiti, yave iripo kweanopfuura makore makumi maviri ichibatsira varwere kuwana vanopa mhando yepamusoro nezvipatara.
Mukuona kweiyo Affordable Care Act inopa varwere kudzora pamusoro pemupi wavo wesarudzo, mabasa evatengesi vezveutano ekushambadzira mhando yavo akura zvakanyanya. Imwe inokurumidza nzira vatengesi vezvehutano vanogona kuisa mhinduro yemurwere pakushandisa kwakanaka ndeyekushandisa mukurumbira manejimendi software kuti vaone zvikanganiso zve network. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kugadzirisa zvichemo nekukurumidza sezvazvinogona, uku zvakare kuri kuwedzera kusangana nematauriro akanaka kubva kuvarwere. Kana kuongororwa kwakaipa kuri kunetsekana, shandisa simba rekugutsikana kwevarwere kuongorora nyaya zvisati zvaitika, vasati vazviisa munzvimbo dzinotarisana neruzhinji senge Healthgrades.
Dzazvino Healthcare Technologies
Isu tinoziva vatengi vanoshuva yazvino tekinoroji. Izvi zvinogona kutonyanya kuva zvechokwadi kana zvasvika kune hutano hutano. Vatengi vanogona kunge vakanaka nekuve neiyo iPhone iri yezvizvarwa zvidiki diki ine yakatsemurwa skrini, asi ivo havazofare kana yavo yazvino uropi scan yakaitwa paMRI scanner mune yakafanana mamiriro.
Mukupindura, vatengesi vezvehutano vakaisa maziso avo pakushambadzira kufambira mberi kwetekinoroji senzira yekugadzira musiyano wemusika.
Zvichida isu tichaenderera mberi nekuona mamwe marobhoti-anobatsira ekuvhiya uye neAI-yakawedzerwa zvirongwa mumakore anotevera. Semuyenzaniso, chidzidzo yakaitwa neStanford University Chikoro cheMishonga chakaona kuwanda kwemarobhoti-akabatsirwa itsvo kuvhiyiwa kubva pa1.5 muzana yakaitwa muna 2003 kusvika 27 muzana muna 2015.
Sezvo kudiwa kwekufambira mberi kwetekinoroji kuchikwira, vatengesi vezvehutano vari kushanda padhuze nemisoro yedhipatimendi kuti vaone misiyano mitsva uye meseji yakakosha pamwedzi uye pagore.
apo kushambadzira kwehutano yakafanana nemafomu echinyakare ekushambadzira, inounza yayo yakasarudzika maonero kune tafura. Nekushandisa zvirongwa uye zviitiko, zvichitarisa mukurumbira manejimendi uye nekujekesa iwo matekinoroji azvino, kushambadzira kwehutano zvinobudirira kunovaka ruzivo pamusoro penzvimbo dzakawanda.
Tags: kushambadzira kwehutanozvehutano twitterzvehutano twitter kushambadzirautanoMarketingmukurumbira manejimendiReviewschii chinonzi kushambadzira kwehutano
Ashley ndiye VP yeKushambadzira pa Formstack, Indianapolis-yakavakirwa fomu chivakwa uye data kutora software mhinduro. Pamberi peFormstack, Ashley akapedza makore masere kuAngie's Chinyorwa akabata zvinzvimbo mukushambadzira, chigadzirwa, uye mashandiro.
BokaHigh: Tsvagiridzo uye Teedzera Yako Blogger Kuparadzira